Concrete vibrator, Concrete Trowel Machinery, Concrete cutter - ACE igwe
anyi bu ndi mgbidi
Anyị na-agbanwe echiche ndị a ka ọ bụrụ ọrụ mmeri.
Ningbo ACE Machinery dị ka ihe ngwọta na-eweta maka ụlọ ígwè na 25 afọ ahụmahụ .With Main ngwaahịa: Concrete vibrator, egosighị mmetụta aro, efere compactor, Tamping rammer, Power trowel, Concrete igwekota, Concrete cutter, ígwè mmanya cutter, ígwè mmanya bender na mini excavator . Anyị nwere 6 ọmarịcha ahịa mba ofesi, ndị injinia 2 nwere ahụmịhe afọ 15, ndị na-ese 4, 3 QC na 1 QA, iji mee ndị otu egosipụtara, ndị nka nwere ọ experiencedụ jiri nlezianya na-achịkwa ihe ndị dị mkpa metụtara usoro nyocha na mmepe ngwaahịa. ele ihe
ewu ewu na ngwaahịa
330kg na 38.0kn Reversible efere compactor
270kg na 36.0kn Reversible efere compactor
160kg na 30.5kn Reversible efere compactor
125kg na 25.0kn Reversible efere compactor
80kgs nwere 15.0kn efere Compactor na mmiri tank
120kgs Concrete jijiji dizel efere Compactor
90kgs na 15.0kn efere Compactor ọnụahịa
77kgs na 13.5kn Honda Plate Compactor
65kgs na 10.5kn jijiji ike efere Compactor
Oyi spraying ụzọ marking igwe
Kacha ọhụrụ na oru ngo
ACE Machinery a na-elekwasị anya na mmepe nke elu-ọgwụgwụ n'ụzọ zuru ezu haịdrọlik rollers. Mgbe ọtụtụ iri afọ nke mmepe, Ugbu a, anyị nwere Single-drum; Ugboro abụọ-drum na Gbaa ịnyịnya na ọma jijiji ala.
** Poclain ma ọ bụ American White Hydraulic system na Hydraulic pump
Ezubere ihe ngosi ACE maka iji ya mee ihe n'ọtụtụ ebe na akụrụngwa akụrụngwa ma jigide ya, bụ ngwa ọrụ dị mkpa maka pavement na-arụ ọrụ, ọrụ nrụzi, obere mpaghara na mkpakọ.
A na-emepụta ACE Mini Excavator na obere ma nwee ọmarịcha na nha ma gbanwee radius. .Dị ahịa kachasị elu: 1.0T-1.2T-1.6T na 2.0T. Ọ na-arụ ọrụ dị iche iche ngwa, Dị ka: ịwụ, Auger, Rake, Ripper, Wood jidere, Broken Hammer ... wdg. tumadi adabara obere ọrụ, n'ogige, ubi mkpụrụ osisi, ala ubi, akwukwo nri griin haus, pipeline ayak, ọchịchị ọrụ na obodo mepere emepe.
Ọ na-anya site YAMAR engine, featuring ala mkpọtụ na magburu onwe echekwa arụmọrụ, Japan Eton njem moto na center jikọọ, ibubata haịdrọlik sooks.
ACE Self Loading Concrete igwekota bụ ụdị multifunctional igwe nke na-agwakọta n'ụzọ n'ụzọ igwekota, ihe igwekota na wheel Loader ọnụ.
Salesdị ahịa kachasị elu: 1.6m3-2.2m3-4.0m3 na 4.2m3
Ọ nwere ike na-akpaghị aka mara, tụọ, mix na ihapu ihe ngwakọta. Ejiri YUNNEI 60kw ~ 92kw Diesel dị ike na draịva 4, onye na-etinye ihe igwekota dị ka ụgbọala na onye ọrụ ya nwere ike ibuga ya ebe ọ chọrọ ịga. Ọ dị ezigbo mfe maka ibu ihe, dị ka simenti, mkpokọta, nkume.
Hitachi ZX690LCR-7 & Oke igwe ...
30 Ọkt, 20
Na nke na-emepe excavator na igwe na-ewu ihe, enwere ọtụtụ ngwaahịa ndị dabara maka ọnọdụ dị iche iche emeela, ma lee akụkọ kachasị ọhụrụ banyere ma ...
21 Ọkt, 20
France R&D na mmepụta center dị nnọọ okokụre a ọhụrụ igwe -R940 Crawler Excavator nke bụ ọhụrụ ngwaahịa maka usoro nke R 944C Uru na ọgaranya ahụmahụ si Libherr, bụ ...
ACE Machinery optimally na-agwakọta ike na finesse iji wetara gị ụlọ ọrụ kachasị mma na igwe ọrụ.
Teknụzụ dị ike